Qaybo ka mid ah waxsoosaarka aluminium ee aluminium ee raqiiska ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ouzhan
Daawaha aluminium ee Anodized wuxuu sameysan karaa lakab labis iyo cufan cufan dusha sare ee badeecada, "(Al2O3, 6H2O magaca caadiga ah ee jaadka)" Filimkani wuxuu ka dhigi karaa adkaanta dusha sare ee badeecaddu inay gaarto (200-300HV) ", haddii alaabooyin gaar ah waa la samayn karaa Anodizing adag, adkaanta dusha sare ee badeecada waxay gaari kartaa 400-1200HV, sidaa darteed anodizing adag waa hab geedi socod daaweyn dusha laga maarmi karo ah oo loogu talagalay dhululubbada saliida, idaacadaha, iyo kuwa kale
6063 aluminium daawaha aluminium anodized CNC machining qaybo
Intaa waxaa dheer, badeecadani waxay leedahay iska caabin xirasho aad u wanaagsan waxaana loo isticmaali karaa habka lagama maarmaanka u ah duulimaadyada iyo alaabooyinka la xiriira aerospace. Farqiga udhaxeeya anodic oxidation iyo qallajiye anodic adag: anodic oxidation waa la midabeyn karaa, qurxintiina aad ayey ugafiican tahay qiiqa adag ee anodic. Dhibcaha dhismaha: Qiiqa oksijiinta wuxuu u baahan yahay qalab aad u adag, walxaha kala duwanna waxay leeyihiin saameyn qurxin oo kala duwan dusha Qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo waa 6061, 6063, 7075, 2024, iwm, oo ay ka mid yihiin, 2024. waa mid liidata sababtoo ah waxyaabaha kala duwan ee CU ku jira maaddada. Sidaa darteed 7075 qayilo adag waa huruud, 6061, 6063 waa bunni, laakiin anodized caadi ah 6061, 6063, 7075 farqi badan uma dhaxeeyo, laakiin 2024 waxay u nugul tahay dhibco badan oo dahabi ah.
Xukunka tayada aan caadiga ahayn
A. Dhibco ayaa ka muuqda dusha sare. Cilladaha noocan ah guud ahaan waxaa sababa deminta birta oo liidata iyo xanaaqa ama waxyaabaha liita lafteeda. Qaabka daaweynta waa in dib loo kululeeyo daaweynta. Ama wax ka beddel.
B. Midabada qaanso-roobaadka ayaa ka muuqda dusha sare. Cilladaha noocan ah guud ahaan waxaa sababa qaladka hawlgalka anode. Waxay noqotaa dabacsan marka la laalaado, taasoo keenta in si aan fiicnayn loo soo saaro sheyga. Xalka, tamar-celinta iyo dib-u-anodize.
C. dusha sare ayaa la nabareeyay oo si xoog leh loo xoqay. Cilladaha noocan oo kale ah guud ahaan waxaa sababa hawlgal taxaddar la'aan ah inta lagu guda jiro gaadiidka ama howsha, habka daaweynta ayaa ah soo celinta korantada, baalasha iyo dib u soo nooleynta.
D. Dhibco cad ayaa ka muuqda dusha sare inta lagu jiro dheehidda. Cilladaan aan caadiga aheyn guud ahaan waxaa sababa saliida ama wasaqda kale ee kujirta biyaha inta lagu jiro howlgalka anode.
Tixraaca heerarka tayada mashiinka aluminium daawaha ah
1. Dhumucda filimku waa 5-25um, adkaanshuhu wuxuu ka sarreeyaa 200HV, heerka isbeddelka midabka ee tijaabada shaabadaynta ayaa ka yar 5%.
2. Tijaabada buufinta milixda waxay ka badan tahay 36 saacadood, waxayna gaari kartaa heerka CNS ee ka sarreeya 9.
3. Muuqaalka waa inaan la burburin, la xoqin, daruuro midab leh, iwm. Dusha sare ee qaybaha aluminium ee aluminiumka lagu farsameeyo waa inuusan yeelan wax ifafaale aan loo baahnayn sida dhibco sudhan, jaalle, iwm.
Faallooyin: Qaybaha aluminium ee Die-cast, sida A380, A365, A382, iwm laguma diidi karo.
Waxyaabaha Daawaha Aluminium 6061, 6063, 7075, 2024
Hore: Aluminium aluminium daawaha qaybo ka mid ah
Xiga: Black anodized 6061-T6 aluminium daawaha qaybo machining CNC